असाइनमेन्टले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki अर्पण
असाइनमेन्ट के हो?
एक अर्पण लेनदेन को भाग मा ऋण सम्बन्ध मा परिवर्तन छ। एक असाइनमेन्ट पनि असाइनमेंटको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो लेनदेन को एक लेनदेन को बदलन को बिना र असाइनमेंट को सामाग्री मा परिवर्तन को बिना यो। एक असाइनमेन्टले सधैँ सम्पत्ति छ र भुक्तानीको साधन र हेजको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। ट्राफिकिङ लेनदेन पनि एक सेडेंट को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यदि उहाँले असाइनमेंट को स्थानान्तरण गर्नुभयो भने, उहाँले यो सबै दावी गुमाउनुहुन्छ। प्राप्तकर्ता लेनदेन, एक असाइनकर्ताको रूपमा पनि जान्छ, सबै दावीहरू प्राप्त गर्दछ। यसमा यो असाइनमेन्ट सम्बन्धी सबै अधिकार र सहायक अधिकारहरू पनि समावेश छन्। सिमेन्टको अवधारणाको सिविल कानुनी परिभाषा सिविल कोडको §398 मा दिइएको छ।
स्वीकार्यता र प्रभाव
सबै दावी असाइन योग्य छन्, प्रदान गरिएको छ कि तिनीहरू पर्याप्त परिभाषित छन्। गैर-असाइनयोग्य प्राप्तिहरू,
- यदि असाइनमेन्ट देनदारसँग सम्झौताद्वारा बहिष्करण गरिएको छ
- यदि असाइनमेन्ट दावीको सामग्रीमा परिवर्तन नगर्न सक्दछ
- यदि दावी संक्रामक छ
- यदि असाइनमेन्ट कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ।
असाइनमेन्टको साथमा यसको सबै सुरक्षित र अधिवेशन अधिकारसँग दावी नयाँ लेनदेनमा पास हुन्छ। असाइनमेन्ट पछि पनि, देनदारले सबै नयाँ धारकलाई नयाँ लेनदेन गरेको छ जुन उनी पुरानो लेनदारको विरुद्धमा थिए।
असाइनमेन्टहरू सामान्यतया दुई रूपहरूमा भेद गर्न सकिन्छ।
मौन र खुला असाइनमेंट
कशन चुप वा खुला फारममा हुन सक्छ। चुप असाइनमेन्ट बिना देयदाता को सूचना को लागी बनाइयो ताकि पुरानो ऋणदाता ऋणी देखि लाभ को मांग गर्न को लागी जारी रहन सक्छ। असाइनमेन्टले पुरानो लेनदारबाट प्राप्त सेवाहरूको माग गर्न दावी गरेको छ। एक नियमको रूपमा, यो डेबिट प्राधिकरण मार्फत गरिन्छ।
खुला असाइनमेन्ट साथ देनदार को एक नोटिस छ। यसरी, नयाँ ल्यान्डरले खुला असाइनमेन्टको स्थितिमा, प्रदर्शनलाई सीधा भुक्तानी दिन्छ
देनदारको लागि संरक्षण प्रावधानहरू
एक असाइनमेन्टले देनदारको लागि केही सुरक्षा प्रावधानहरू समावेश गर्दछ। त्यसैले यो गर्न सक्छ
- एक दावी संग उनले पुरानो लेनदेन विरुद्ध, नयाँ लेनदेन विरुद्ध पनि।
असाइनमेन्टको अज्ञानताको अनुहारमा नयाँ लेनदेन विरुद्ध पुरानो लेनदेनलाई अफसेट भुक्तान गरियो।
- यो असाइनमेंट पनि लागू गर्नु पर्छ यदि यो सबै मा प्रभावशाली ढंग देखि नहीं गरेको छ या नहीं प्रभावी ढंग देखि, तर केवल असाइनमेंट देनदार को संकेत दिइन्छ
लेनदेन हुन सक्छ, नयाँ लेनदेन को ज्ञान संग, असाइनमेंट को मांग को प्रमाण। यदि यो गरेन भने, देनदारले प्रदर्शन अस्वीकार गर्न योग्य छ। त्यस्तै गरी नयाँ क्रेडिटकर्ता द्वारा दावीमा दाबी वा अनुस्मारकहरूको खारेज प्रभावकारी छ। यद्यपि, देनदारले यसलाई तुरुन्त अस्वीकार गर्नु पर्छ। यदि पुरानो लेनदारले असाइनमेंटको देयदातालाई सूचित गर्यो भने, कागजातको प्रस्तुतीकरण आवश्यक छैन।
प्रायजसो अवस्थामा उनीहरूले बैंक ऋण हेज गर्थे।
यस्तो असाइनमेन्ट सुरक्षाको खातिर बनाइन्छ र संपार्श्विकको रूपमा संपार्श्विक असाइनमेन्ट भनिन्छ। उधारदायीहरू प्राय: बैंक वा क्रेडिट संस्था हो। यो उधारकर्ता संग एक सुरक्षा अनुबंध, जो एक अनुबंध सम्बन्धी सम्बन्ध हो। यस प्रकार सुरक्षा जम्माले यसको सुरक्षाको लागि ऋणदातालाई दावीको असाइनमेन्ट समावेश गर्दछ। उधारकर्ताले हस्तान्तरण गरिएका लेनदेनको रूपमा कार्य गर्दछ, जबकि बैंक वा क्रेडिट संस्था पावरिभ प्राप्त हुन्छ।
अघिल्लो लेखजारी मूल्य
अर्को लेखपरिशोधन अवधि